2In1 3D Fiber Eyelashes ရှည်ရှည် Mascara ကိုဝယ်ပါ။ အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
2In1 3D Fiber Eyelashes ရှည်ရှည် Mascara
$8.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $12.99
2In1 3D Fiber မျက်တောင်ရှည်ရှည် Mascara - အနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
နာမည်: Mascara Curling Eyelash Makeup
အကျိုးကျေးဇူး: ကြာရှည်ကောက်,မြန် / မြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊moisturizer,ထူသော
ရေစိုခံ / ရေ-resistant: Yes
2 အမှတ်တံဆိပ် BIOAQUA Mascara Volume Express နှစ်ဆအကျိုးသက်ရောက်မှုမျက်လုံးမိတ်ကပ်ပစ္စည်း
ရှည်လျားသောကြာရှည်ခံ Maquiagm2ပိုးထည် Mascara တွင် 1D Fiber Makeup Set များ BIOAQUA အမှတ်တံဆိပ်အားရှည်စေသည့် Mascara
ကန့်သတ်သည့်ရက်စွဲ -3နှစ်
လုပ်ဆောင်ချက် - အထူအထူ၊
Получиливсевточностисописанием! BIOAQUA ကို ၀ ယ်လိုပါကзаказываемнапротяжении2года, качествовеликолепное!
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်မှာကြားထားသည့်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ငါအနည်းငယ်ဒီအချိန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ငါပုံမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ငါ၌တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ဖော်ပြထားအဖြစ်သူတို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။ Hawai'i သို့အမိန့်မှသည် ၃ ပတ်ခန့်ကြာသည်။ သငျသညျကြိုတင်နွေး eyelash curler သုံးလျှင်အကောင်းဆုံး။ ငါပုံထဲမှာတ ဦး တည်းကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး အရာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကုန်သွားသည်သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့ခြင်းမတိုင်မီနှစ်လခန့်ကြာရှည်သော်လည်းယင်းသည်စျေးနှုန်းအတွက်သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။
всеотлично။ качественносделаннаятушь.ресницыудлиняетносильноосыпается။ продавцарекомендую
Тушьхорошая။ Упакованавконвертс "пупыркой", заслюдирована.Продавецобщительный။ Спасибопродавцу!